Tavoahangy kosmetika, tavoahangin'ny biby fiompy, tavoahangy famaohana - Kechang
Tavoahangy fantsom-bozaka PVC 2 oz mazava miaraka amina vozona 20-415
Tavoahangy plastika plastika 9 Oz voajanahary misy 28-4 ...
Fomba vaovao 3-5ml fotsy voajanahary PE fivaviana anal ...
HD HD 17 Oz mazava tsara mitazona tavoahangy plastika misy ...
0,3 0,5 oz fotsy HDPE tavoahangy mitete volo miaraka ...
0,5 oz (15ml) tavoahangy tavoahangy boribory PETG ...
Tavoahangy ambony tavoahangy PETG ambony 2 Oz mahery ...
Tavoahangy vita amin'ny plastika fotsy HD Oz 100 Oz misy 40-4 ...
Tavoahangy ranon-tsakafo PETG 17 oz mavokely misy 28-41 ...
Tavoahangy heksagon PET 2 oz madio misy tenda 24-410 ...
Tavoahangy heksagon PP fotsy 2 oz misy tenda 34-400 f ...
1.7 Oz Oz HDPE tavoahangy fisaka misy tendany 12-410 ...
Ny tavoahanginay fotsy 100ml dia vita amin'ny fitaovana HDPE. 100% vaovao sy avo lenta. Vita amin'ny plastika, azo ampiasaina indray, mahatohitra mora vaky ary azo simbaina. Azo soloina sy azo averina soloina. Ny tavoahangy mainty dia azo ampiasaina amin'ny fonosana loko volo, conditioner ary shampoo. Azo ampiasaina hizarana sy hitehirizana ny ankamaroan'ny rano. Ny habeny sy ny karazany isan-karazany dia azo fidina. Volavola kely, azo entina, tena mety amin'ny dia, kitapo ary fety. Ny tavoahangy kely dia azo averina simba ary tsy misy rano mitete fotsiny. Serivisy OEM: Pirinty vita amin'ny lamba landy Logo, marika taratasy, labozy plastika, aforeto, mora ampiasaina sy hadio. Ny habe kely dia mety amin'ny fivezivezena na amin'ny fitehirizana sy ny fandaminana manodidina ny trano. Famolavolana fonosana roa, voaisy tombo-kase mafy hisorohana ny famoahana rano sy hamaly ny filanao fitahirizana.
Product Detail Ny tavoahangin-tsika 17 oz / 500ml dia vita amin'ny fitaovana PETG mba hahitana vokatra tsara sy vita farany. Ny vatan-tavoahangy dia toradroa misy zoro efatra, manome anao traikefa tsaratsara kokoa sy ...
Product Detail Ny tavoahangin-bolantsika 2 Oz / 60ml dia vita amin'ny fitaovana PP ho plastika tsara kokoa sy vita. Ny vatan'ny tavoahangy dia boribory, manome anao traikefa tsaratsara kokoa sy fiasa fampisehoana talantalana. ...
Ny orinasanay dia nanangona mpikaroka siantifika sy mpitantana ambony momba ny siansa avo lenta, nanamboatra laboratoara fitiliana azo antoka. Miaraka amin'ny fampandrosoana ny toekarena amin'ny tsena, amin'ny alàlan'ny vokatra avo lenta, serivisy tsara ary laza tsara, dia raisinay tsara ny mpanjifa.